Ihe ndi choro ime otutu bu ihe zuru oke na ulo oru mmeputa na nke ahia. A na-ekezi ajụ oyi ụzọ abụọ:
Industrial Usoro jụrụ
A na-etinye ụdị jụrụ oyi a mgbe njikwa njikwa ọnọdụ ziri ezi na mgbe niile nke ọnọdụ dị n'ime usoro chọrọ.
Ebe ndị dị jụụ gụnyere
■ Direct jụrụ nke a ngwaahịa
Plastic n'oge usoro ịkpụzi
Ngwaahịa ọla n'oge ịkpụzi
■ Ime ka usoro dị otu
Azụ ụka nke biya na lager
Chemical arịa arịa
Cooling Igwe ihe jụrụ oyi
Hydraulic circuit na gearbox jụrụ
Gbado ọkụ na laser ịcha ígwè
A na-ejikarị Chillers ewepụ okpomọkụ site na usoro n'ihi ike ha iji nye ike jụrụ ajụ n'agbanyeghị mgbanwe nke ọnọdụ ihu igwe, ibu ọkụ na mkpa chọrọ nke ngwa ahụ.
SPL Emechiri Loop Cooling tower n'ihu na-eme ka arụmọrụ na ụgwọ ọrụ nke sistemụ a
Nkasi obi jụrụ / njikwa ihu igwe
Typedị teknụzụ a jụrụ ajụ na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri n'otu oghere. Nkà na ụzụ na-adịkarị mfe ma jiri ya mee ụlọ dị jụụ, oche eletriki ma ọ bụ ebe ndị ọzọ ebe njikwa okpomọkụ ekwesịghị ịdị na mgbe niile. Igwe ikuku ikuku daba n'ime otu ndi oru uzu.
SPL Evaporative Condenser ọzọ enhances arụmọrụ na-eri nke usoro ihe a
Kpọọ ndị ahịa anyị ka anyị ghọtakwuo usoro a na ngwa ya.